Nhanganyaya kuna Grobli Zirignon's "Point de suture" naTanella Boni - Afrikhepri Fondation
Musumo kuna Grobli Zirignon's "Point de suture" naTanella Boni
DMushure mekuunganidza kwake kwekutanga, Epaves (1981), Grobli Zirignon akaisa toni. Akazviti ndiri mudetembi wekudzingwa, wekudzungaira kusingaperi.
Akange aimba kuvepo kwemurume asina kuverengerwa mukutsvaga kubatana kwake kwakarasika. Kupararira (1982) kwaive kwakasimudzira dingindira rekukoromoka kwekuvapo kwemunhu "akakandwa semafuro" muchadenga, mukutarisira kwese kwese kufa muRenje risinganzwisisike. Zvese zvinoitika sekunge nyanduri, munzira ino, akavezwa, kunge protozoan, akatenderedza pakati penzvimbo, akaiswa pakati pekufa, kuvapo, uye Hupenyu hwechokwadi, ichi chikara chisingaperi. kutikanganisa kubva parwendo rwedu rwusingadzokeri kwarwakananga.
Mubhokisi rake remishonga, nyanduri aripo akaisa mufaro wake uye wedu, kungodonha kweruzivo rwega mune maviri kana matatu mapeji; kozoita bhuru rakaisvonaka rezvimedu zvakashandurwa kubva ek-sistence, kubva kuLimi, kubva kuRuzivo, kubva kuna Mwari, kubva kune Imwe.
Asi kuuraya rufu sei kana hondo iri viaticum, kana Polemos, sezvakataurwa nevaporofita, ndiBaba vezvinhu zvese? Ek-sistant, uyu wekudzingwa nekusingaperi, haana sarudzo. Akayambuka pakati pezvirambidzo zviviri: iyo yekuvharika yevafi yeRufu iyo isingafi nehondo yekusingaperi. Pamwe anowira mu "hwaro hwaro" wevapenyu-vakafa kana neushingi uye nekuzvikudza anodonhedza gauni yake-yehupenyu mutongo. Asi mune ese mamiriro, anofamba-famba zvisina chinangwa, semurindi akavimbika kunzvimbo yake kana shiri yakavharirwa. Kusafara, kunyimwa kunakirwa, kugumbuka.
Kana akaitika kuti abve mune iyi vertigo inodiwa, achapora, aine basa saJE. Inozogadzira mabhuru uye denderedzwa pamusoro pegungwa, ino yakasarudzika Imwe, ine nhamba iri kuparadza Amai, ichibuda, inovhiringidza.
Rutivi rwechivanze. Mheremhere yeMutauro, izvi zvinotambudza zvinoratidza kuti hapana munhu anotora, zvinoumba corollary isingadzivisike yechero kudzingwa. Kunze kwekunge iyo ek-sistant inotaura zvinonzwika kana zvichidikanwa, pasina kana hanya nekuvapo uye kutarisisa kweumwe, chero iye achingoita seyeye ega museve, yake sekisi chiito; regai iye afare, achifamba senge tambo inofamba pane tambo, zvirinani, rickety caiman-zambuko, rakamiswa pakati pedenga nepasi pamusoro pegungwa.
Divi rebindu. Iwe unofanirwa kufungidzira mudetembi aripo saRobinson Crusoe asina Chishanu chake. Stranded Hakuna, ichaputsa Dombo mune renje chitsuwa. Achaisa muviri nemweya, semunhu akasununguka, kukunda "polder" asingatyisidzirwe nekusingaperi nekuva gwenga. Achakura ipapo kwete tulip asi "irozi / ruva rejecha", iro raachakurumidza kuziva.
Saka achave nezororo rekuona, nekuda kwemamiriro ekunze akanaka, "kupenya" kweDenga Pasi Pano. Zvirongwa zvishoma zveParadhiso zvichavhurika patsoka dzayo. Illusory uye chimerical nzvimbo, mwenje kubva kumwe kunhu. Achavabhabhatidza Chokwadi, Kutenda, Mwari… kunyepedzera uku kwaachada kusvika pakufa. Iyo yakanaka yerudo nyaya, ine yakawedzera bhonasi yezuva rakarasika. Mwari, muchokwadi, "yedu yakakwana yakapetwa" uyezve inokwezva pfungwa, acharamba asipo. Zvachose. Tete-akarota tete, naBaba, hazviitike.
Nyika ichave riri basa reanenge aripo muenzi kana ichave isipo. Asi "kune imwe" sekuda kwaLacan. Ichi ndicho chikonzero iye aripo murapi achakunda, kunyangwe zvese, muyedzo wekuzviuraya.
Minerva Mundi - Hermes Trismegistus (PDF)
Akachena-ane ganda ane makore angave achingova makore mazana masere emakore muEurope, kudzidza kunowana
Ma Ananda Mayi anoziva saiye mukuru mukuru weIndia wezana remakore re20th
Hurukuro naAimé Césaire
Dumbu rine 200 mamiriyoni neuroni uye ingadai iine uropi hwechipiri